Umzabalazo wango-1956 usunezithelo ezinhle kwezemidlalo -Isizulu Newspaper | Bayede News
Home/ Ezemidlalo/Umzabalazo wango-1956 usunezithelo ezinhle kwezemidlalo
Umzabalazo wango-1956 usunezithelo ezinhle kwezemidlalo
NJENGOBA ngeSonto iNingizimu Afrika izobe igubha usuku lwabesifazane ababa nesibindi sokugasela eziNdlini zoMbuso i-Union Buildings ePitoli bekhala ngohulumeni wobandlululo owawusufuna abantu besifazane abamnyama baphathe amapasi ngo-1956.
LOWO mzabalazo usukhiqiza izithelo njengoba izwi lembokodo selizwakala. Akusagcini kuphela ngokuthi imbokodo ingene kuzwakale ekuphatheni ezinkampanini ezinkulu, kepha nasezinhlanganweni zezemidlalo lapho kwaziwa khona ukuthi kuphethe amadoda, igalelo labo seliqala ukbonakala impela .
IBAYEDE ikhethe ukunekela aboHlanga ngabesifazane abambalwa asebeyibekile induku ebandla emidlalweni ehlukenene.
Selokhu elakuleli lathola inkululeko ngowe-1994 isibalo sabesifazane abaqokelwa ezikhundleni eziqavile ezinhlanganweni zezemidlalo zebhola, eze-netball, zesibhakela naseMnyangweni WeZemidlalo sesikhule kakhulu. Phela ngezikhathi zakudala lena kwakuyinto engacatshangwa nakucatshangwa ukuthi owesifazane angake asondele kwezemidlalo ngenhloso yokuzophatha.
Umuntu wesifazane ozisondeza kwezemidlalo okwakwaziwa ukuthi kukhonya amadoda kuyo wayethathiswa okomuntu oyisiphoxi emphakathini. Akusenjalo manje. Abanye besifazane abagxilanga ekudlaleni kepha baqinise ngasekuphatheni njengoba abanye benamaqembu akuPremier Soccer League (PSL) kanti abanye banezikhundla enhlanganweni engamele unobhutshuzwayo kuleli, iSA Football Association (SAFA). Naba abambalwa esikhethe ukubika ngabo:
Kukhulunywa indaba yokuthi sekuseduze ukuthi iBanyana Banyana ingene kumaRio Olympic Games wezi-2016 kungenxa yokuzikhandla kwale ntokazi yaseHarding. Selokhu u-Amanda ayibamba ngowezi-2007 kanti usebizelwe eqenjini lesizwe izikhathi ezingama-68 washaya amagoli angama-21. U-Amanda waba semlandweni ngokuba wukaputeni weqembu lesizwe eladlala okokuqala ngqa kuma-Olympics ayeseLondon ngowezi-2012. Uke waba futhi umshayi magoli ovelele ngowezi-2008 ku-Sasol Women’s League. Wayeyingxenye yeqembu elazuza indondo yethusi ku-2010 African Women’s Championship nesiliva kowezi-2012. Akagcini ngokulihlikihla kuchwaze izihlwele, uphinde ashiye izethameli zikamabonakude zichazekile ngendlela alihlaziya ngayo ibhola kuSuperSport
Lo sihlalo weGolden Arrows ulwe kanzima ukubuyisa leli qembu laseLamontville ehlathini njengoba beligawulwe izembe ngesizini ka-2014/15.
UMato, odume ngokuqinisa isandla, ikakhulukazi kwabezindaba abasuke befuna ukubuza ngokungekuhle ngeqembu, wazalelwa emndenini webhola eLamontville.
Kuthiwa ibhola ulifunde esemncane. Uqale ukugqama emphakathini ngesikhathi yena nomfowabo uRocky, ongasekho emhlabeni, befaka iqembu iGolden Arrows kuPSL ngowezi-2000. Ubuhlakani bakhe benze waqokelwa esigungwini esiphezulu sale nhlangano, okuyikomiti eliqavile elithatha izinqumo.
UMato, ofundele ukuba yiChartered Accountant, ube nesandla kutholwa amalungelo okusakaza ibhola kuTV, okwenze iSuperSport yasayina isivumelwano sika-R1,2 billion iminyaka emihlanu. UMato uphinde abe wumqondisi we-INkosi Albert Luthuli International Convention Centre ohlangothini lwetravel, tourism and hospitality.
Lona wudadewabo omdala womethuli wezinhlelo zezemidlalo uRobert Marawa osemnkantshubomvu ekuphatheni. Waqala ukusebenza kuSafa kusaphenjwa iqembu lesizwe lika-Under 23, elalidume ngelamaGlug Glug maphakathi nowe-1994 kuya kuya kowe-1996.
Wayesebenza njengemenenja yeqembu, umsebenzi wakhe kungukuxhumana namaqembu akuleli nawaphesheya ngendaba yokubizelwa kwabadlali eqenjini lesizwe. Ukuwenza ngendlela ehlekile umsebenzi kumkhuphulele esikhundleni esifanayo kuBafana Bafana.
Abamazi kahle bathi akabhenywa engensangu njengoba abesilisa abamthatha kancane ubatshela kwezikabhoqo lokho asuke engahambisani nakho. Ukukhombisa ukuthi akazwani nento engacacile kwaba wukushiya kwakhe isigubhukane emsebenzini wokuba yisekelamenenja ngemuva kweNdebe yoMhlaba yowezi-2010. Le ntokazi yalibeka ngesihloko elokuthi angeke ikwazi ukusebenzisana nalowo owayezothatha izintambo ku-Alberto Carlos Perreira, uPitso Mosimane. Imibiko engaqinisekiswanga yathi yindlela azithwele ngayo uMosimane eyayizokwenza bangasebenzisani kahle.
Usebenze isikhashana neGolden Arrows njengemenenja jikelele nokho wangahlala isikhathi eside wayokwenza umsebenzi kaHulumeni wesiFundazwe saKwaZulu-Natal. Njengamanje uyiSenior Manager kwaSports Development And Events ehhovisini likaNdunankulu. UGugu ungomunye wabantu abaphambili ekuhleleni iDurban Under 19 International Football Tournament esidlalwa okwesibili eThekwini.